WELCOME TO newzimbabwevision media platforms and New Zimbabwe Vision group where you can engage other progressive minded individuals. – newzimbabwevision
WELCOME TO newzimbabwevision media platforms and New Zimbabwe Vision group where you can engage other progressive minded individuals.
WELCOME TO newzimbabwevision media platforms and New Zimbabwe Vision group where you can engage other progressive minded individuals. Please join the newzimbabwevision media platforms where you can engage other progressive minded individuals in debate on issues directly affecting the welfare of the ordinary person in the motherland such as Political ,Economic, Equality, Girl Child, Peace, Good Governance, Democracy, Human rights, Accountability, Service Delivery in Employment, Housing ,Education, Health care, Transport, Water reticulation issues and any pertinent topic.
You can email your articles, photos, breaking news, exposures and other, to newzimbabwevision@yahoo.co.uk for publication by our newsdesk and sharing across our news platforms to our groups, currently standing at:.
1) Zimbabwe News 4 us Zimbabweans group 73,293 members
3) New Zimbabwe Vision group 16,255members
4) Newzimbabwevision website 19,925 Likes
5) Followed by 8,537 people on my timeline. By Sibusiso Ngwenya,
Ex Finance Minister, People’s Democratic Party leader, Tendai Biti claims Mugabe blocked adoption of the Rand in 2010